Pevhu 3 Zvakaipa zveCaribbean DLC Inounza Hondo Kumahombekombe Ejecha | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida Dungeons, ikozvino neiyo DLC Pevhu 3 Zvakaipa zveCaribbean iyo inowanikwa pane Steam uye GOG iwe uchanakidzwa zvakapetwa zvakapetwa. Iwe unogona kutotenga iko iko kweLinux futi, iine zvimwe zvinhu zvitsva sekuunza zvese zviito nehondo kumahombekombe ane jecha eTurtoga. Inzvimbo yakanaka iyo icharega kuve yakadaro nezviito zvese zvaunowana muDungeons 3 uye nhau dzekuburitswa kutsva zvichienzaniswa neiyo yapfuura DLC.
Iyi haisi DLC hombe, senge yapfuura DLC, asi haisi kuvhura iyo inosanganisira mutengo unodhura. Pamutengo wakaderera, tinogona kunakidzwa nezvakakwana maficha ekuwedzera iwo mutambo weDungeons 3 kupfuura zvataive tatova nazvo. Nenzira, kune avo vasingazive, iyo DLC (Dhawunorodha Zvemukati) ndizvo chaizvo izvo zita rayo rinoratidzira, zviratidzike zvemukati izvo isu zvatinokwanisa kuwedzera mitambo yedu nenhau uye nezvimwe zvemukati Muchiitiko cheDungeons 3 Zvakaipa zveCaribbean DLC, tinogona kuwana mushandirapamwe mutsva nemamepu matatu matsva akawedzerwa nevakagadziri kuti vape kuwedzera kwakanaka kwepasirose nyika yeDungeons 3. Izvi zvinoreva kushoma monotony uye mimwe mitambo yenoverengeka dai iwe wakange watopfuura iwo apfuura. Mukuwedzera kune izvo zvirimo, kune zvakare matatu mahubhu matsva uye nyowani yemadziro matare, pamwe nehembe nyowani yepirate yaThalya.
Sezvandambotaura kare, unogona kuzvitenga zvese muValve Steam chitoro, uye mumakwikwi eGOG. Pamativi ese maviri unogona kuzvitengera iyo anenge € 4.99, sekutaura kwandakaita, haina kukwirira mutengo. Kune isingasvike mashanu euros isu tine zvese izvo zvemukati zvakawedzerwa, saka zviripo. Kana iwe usina chokwadi kana Dungeons 5 ndiwo mutambo wako, unogona kutarisa sampuro mavhidhiyo pawebhu kuti uone zvauchasangana nazvo kana iwe ukachiwana. Asi ini ndinogona kukuudza kuti iri zita rakanaka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Pevhu 3 Zvakaipa zveCaribbean DLC inounza hondo kumahombekombe ane jecha